08/06/2018 - Page 2 sur 4 -
Andravoahangy : Mpivady nahatrarana vola sandoka
Lehilahy iray sy vehivavy iray, voalaza fa mpivady no tratra am-bodiomby teo am-pandefasana vola sandoka teny Andravoahangy ny talata lasa teo. Araka ny loharanom-baovao avy eo anivon’ny polisim-pirenena, dia mody nividy entana teo amina mpivarotra …Tohiny
Fitadiavan-tseza ho minisitra : Samy manao izay ho afany ny rehetra
Taorian’ny fanolorana ny praiminisitra izay efa eken’ny rehetra dia mandeha indray izao ny fomba fitadiavan-tseza amin’ny alalan’ny fomba maro samihafa, ary izany dia tsy mifidy fomba fanao. Ekena aloha fa tsy maintsy hisy ny fanovana …Tohiny
Aiza ny minisitera misahana ny fikojakojana ny lalana eto an-drenivohitra ? Raha ny hita manerana ity renivohitra ity, dia tsy manao ny asany mihitsy io minisitera io fa variana amina zavatra hafa angamba. Satria tokoa …Tohiny
Tsy ampihambahambana no nanambaran’ny sekretera nasionalin’ny antoko Parti Social-Démocrate na PSD, Eliana Marie Bezaza, fa “mihazakazaka hangala-bato amin’ny fifidianana ny Mapar”. Voalaza fa efa mifandrirotra amin’ny ady seza amin’ilay governemantan’ny marimaritra iraisana mantsy ireo olon’ny …Tohiny